TOP NEWS: Madaxweyne Xasan Shiikh oo Qaramada Midoobe ka Dalbaday Hal Arin oo Muhiim u ah Dowlada Federaalka – Kismaayo24 News Agency
by admin 20th April 2016 058
Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka codsaday in dalka laga qaado cuna-qabataynta hubka,si ay ciidamada xoogga ugu adkaadaan ururka Al-shabaab.
Xasan sheekh oo ayaa qudbaddii uu halkaasi ka jeediyay kusoo qaaday dhibaatooyinkii ka dhashay dowlad la’aanta oo ay weli raadadkooda muuqdaan,taasoo uu ku tilmaamay in lagaga bixi karo xoojinta ammaanta iyo nabadaynta dalka oo dhan.
Madaxweynaha oo si weyn ugu nuux-nuuxsaday tayaynta iyo dib u dhiska ciidamada difaaca qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in taageerada beesha caalamka ay u tahay mid muhiim,isagoo xusay in la qaaday tallaabooyin wanaagsan oo lagu hubinayo qorista Ciidamada iyo mushaarkooda, waxaa uu xusay inay ka shaqeynayaan isku dhafka ciidamada qaranka.
Waxaa uu sheegay in afar guuto oo ka tirsan Ciidamada Jubbaland lagu soo biiriyay ciidamada xoogga dalka,iyadoo la rajaynayo in bisha July ee soo socota in labo guuto kale lagu soo biiriyo,waxaana sidoo kale bisha soo socota lagu soo biirinayaa sida uu madaxweynuhu sheegay saddex kun oo ka tirsan ciidamada maamulka Puntland.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sanaddii 1992-dii kusoo rogay Soomaaliya cunaqabatayn xagga hubka ah, si loo xakameeyo fowdadii dalka ka taagnayd xilligaas,waxanay xayiraadda hubka oo laga qaado waqtigan ka dhigan tahay soo nooleynta tagadii ciidanka xoogga dalka maaddaama ay jirto dowlad dhexe oo aan ku meel ahayn.
TOP NEWS: Maxaad kala Socotaa Heshiis Dhexmaray Dowladaha Masar iyo Soomaaliya iyo waxa uu Salka Ku haayo Heshiiskaasi
TOP NEWS: Maamulka Ahlu Sunna ee Gobolada Dhexe oo Xukumay Maleeshiyaadkii uu watay Liibaan Madaxweyne ee la dagaalamay Ahlu-Sunna
TOP NEWS: Dhageyso” Madaxweynaha Galmudug” Puntland waxan iska kaashan doonna Dagaalka ay kula Jiraan Alshabaab
Maamulka Galmudug oowar kulul ka soo saaray qaraxii ka dhacay Magaallada Galkacyo